Qhagamshela ngaphandle kwentambo kwi-Intanethi ngeWindows 8
IWindows 8 rhoqo khangela uqhagamshelo lweIntanethi olusebenzayo. Ukuba ifumana into obukhe wayisebenzisa ngaphambili, usete: iiWindows zidlulisa iindaba kwi-Internet Explorer, kwaye ukulungele ukutyelela iwebhu.
Xa uhamba, nangona kunjalo, iinethiwekhi ezingenazingcingo ezikungqongileyo zihlala zihlala zintsha, ke kuya kufuneka ugunyazise olu nxibelelwano lutsha. Nanini na xa ufuna ukunxibelelana nenethiwekhi entsha, kuya kufuneka uxelele iiWindows ukuba ufuna ukudibanisa, nceda.
Ukuqhagamshela kwinethiwekhi ekufuphi engenazingcingo okokuqala ngqa, nokuba yeyiphi ekhayeni lakho okanye kwindawo kawonkewonke, landela la manyathelo:
Biza iCharms bar kwaye ucofe okanye ucofe i icon yeZeto.
Nawaphi na amaqhinga amathathu abiza iiCharms bar kunye neesetingi zesikrini:
Imouse: Khomba kumda wekhusi phezulu- okanye ezantsi ekunene; xa ibha yomtsalane ivela, cofa indawo ethi Useto icon.
Ikhibhodi: Cinezela iWindows + ukuya ngqo kwiscreen seCharms bar seSetingi.
Isikrini esibanjwayo: Slayida umnwe wakho ngaphakathi kwicala langasekunene kwesikrini; xa ibha yomtsalane ivela, cofa i icon yeZeto.
Cofa okanye ucofe i-icon yenethiwekhi ngaphandle kwamacingo.
Phakathi kweesethingi zesikrini ezithandathu zeempawu, enye ephezulu ngasekhohlo imele iinethiwekhi ngaphandle kwamacingo. I icon iyatshintsha imilo, ngokuxhomekeke kwindawo ekungqongileyo:
Iyafumaneka: Xa i-icon isithi iyafumaneka, njengaleyo isemdeni, ukuluhlu lwenethiwekhi engenazingcingo. Qalisa ukuvuza amathe kwaye uye kwinqanaba elilandelayo.
Teva 834 umjikelo omhlophe
Ayifumaneki: Xa i-icon isithi ayifumaneki, njengaleyo isemdeni, awukho kuluhlu. Ixesha lokuya kwisihlalo esahlukileyo kwivenkile yekofu okanye mhlawumbi ivenkile yekofu eyahlukileyo iyonke. Emva koko buyela kwiNyathelo 1.
Cofa okanye ucofe i icon efumanekayo ukuba ikho.
Uluhlu lweWindows luyidwelise yonke inethiwekhi ngaphandle kwamacingo e-PC yakho. Musa ukumangaliswa kukubona iinethiwekhi ezininzi zidwelisiwe; ukuba usekhaya, abamelwane bakho mhlawumbi bayabona inethiwekhi yakho idwelisiwe, nayo.
Khetha ukunxibelelana nenethiwekhi oyifunayo ngokunqakraza igama layo kwaye ucofe iqhosha lokuQhagamshela.
Ukuba ukhetha indawo yoQhagamshelo ngokuzenzekelayo jonga ibhokisi ngaphambi kokucofa iqhosha lokuQhagamshela, iiWindows ngokuzenzekelayo zinxibelelana naloo nethiwekhi ngexesha elizayo xa ukuluhlu, ukusindisa ekunxibelelaneni ngesandla ngalo lonke ixesha.
Ukuba uqhagamshela kwi inethiwekhi engakhuselekanga - inethiwekhi engadingi kugqitha- ugqibe. IiWindows zikuxwayisa malunga nokunxibelelana nenethiwekhi engakhuselekanga, kodwa ucofe okanye ucofe iqhosha lokuDibanisa likuvumela ukuba uqhagamshele, nokuba kunjalo. (Sukuthenga okanye wenze ibhanki kunxibelelwano olungakhuselekanga.)
Ngenisa igama lokugqithisa xa lifuneka.
Ukuba uzama ukudibanisa kwifayile ye- Ukhuseleko-lwenziwe uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo, iWindows ikucela ukuba ufake ifayile ye- ukhuseleko lwenethiwekhi - technospeak ye inombolo yokuvula. Ukuba usekhaya, nantsi apho uchwetheza igama elifanayo ongene kulo kumzila wakho xa useta inethiwekhi yakho engenazingcingo.
Ukuba uqhagamshela komnye umntu enye Inethiwekhi engenazingcingo ekhuselwe ngegama eligqithisiweyo, cela umnini wenethiwekhi iphasiwedi. Ukuba uhlala ehotele, khupha ikhadi lakho letyala. Kuya kufuneka uthenge ixesha lonxibelelwano kubantu abasemva kwedesika engaphambili.
Khetha ukuba ufuna ukwabelana ngeefayile zakho nabanye abantu kwinethiwekhi.
Ukuba uqhagamshela kwikhaya lakho okanye kwinethiwekhi yeofisi, khetha u-Ewe, vula ukwabelana kwaye uqhagamshele kwizixhobo. Oku kukuvumela ukuba wabelane ngeefayile nabanye kwaye usebenzise izixhobo eziluncedo, ezinje ngeeprinta.
Ukuba uqhagamshela kwindawo kawonkewonke, ngokuchaseneyo, khetha Hayi, sukuvula ukwabelana okanye uqhagamshele kwizixhobo. Oko kugcina ii-snoops.
Ukuba useneengxaki zokudibanisa, zama ezi ngcebiso zilandelayo:
Xa iWindows isithi ayinakunxibelelana nenethiwekhi yakho engenazingcingo, inikezela ngokuzisa i-Network Troubleshooter. Isisombululo seNethiwekhi sisombulula ingxaki emva koko sithethe into malunga nomqondiso wokuba buthathaka. Ngokwenyani iyakuxelela oku: Sondela kufutshane nesidlulisi esingenazingcingo.
Ukuba awukwazi ukudibanisa kwinethiwekhi ekhuselekileyo oyifunayo, zama ukudibanisa nenye yeenethiwekhi ezingakhuselekanga. Iinethiwekhi ezingakhuselekanga zisebenza kakuhle ngokukhangela okungaqhelekanga kwi-Intanethi.
Iifowuni ezingenantambo kunye nee-oveni zemicrowave, ngokungaqhelekanga, ziphazamisa iinethiwekhi ngaphandle kwamacingo. Zama ukugcina ifowuni yakho engenazintambo ngaphandle kwegumbi elinye njengePC yakho engenazingcingo, kwaye ungayitshisi loo sangweji xa ukhangela kwiwebhu.
Ukuba ibar yomsebenzi wedesktop yakho iqulethe i-icon yenethiwekhi engenazingcingo (iboniswe kumda), cofa kuyo ukuze utsibe inyathelo 3. Ngelixa usebenza kwidesktop yeWindows 8, loo icon yenethiwekhi engenazingcingo ibonelela ngendlela efanelekileyo yokuqhagamshela ngaphandle kwamacingo kwiindawo ezintsha.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neWindows 8 kunye neempawu zayo, jonga IWindows 8 F okanye iiDummies , ziyafumaneka kwi-intanethi.
indlela yokubala umzuzu we-inertia
Ofloxacin 0.3 wamehlo
Ipilisi emhlophe engqindilili 377
Idosi yemini ngobunzima
tshintsha iphasiwedi iphasiwedi 10